MAHAFINY De Havilland DHC5 Mpiasa-Tondraka Canadiennes FSX - Rikoooo
Downloads 16 200
Io turboprop mahery kambana mahery vaika io dia ampiasaina amin'ny fikarohana sy ny fiarovana ny fiaramanidina sy fiaramanidina. Ny fiarandalamby dia manokatra toerana sy tondra-drano.
Asa atao entina / miala.
Miaraka amin'ny Acceleration / SP2.
Famenon-kaody "famatsiana tahan'ny", izany hoe tonga lafatra amin'ny fanamafisana sary grika kely, satria fantatry ny rehetra izany FSX dia (koa) mpangataka.
Azonao atao ny manatanteraka asa maro araka izay voalaza etsy ambony, ity fiaramanidina ity dia hiditra ao amin'ny trano fialofanao.